Lollipop recipe (yakagadzirirwa) + Video Tutorial - Candy
A lollipop recipe yakakwana pakugadzira tsika dzeklipop keke
Iyi recipe lollipop iri nyore kuita uye yakanyatsogadziriswa. Chinja iwo mavara, zvinonhuwira uye kushongedza kuti zvienderane netimu yako. Ndinoda kugadzira iyi lollipop recipe nekuti inogadzira hombe kukanganisa uye haitore basa rakawanda. Yakakwana kune avo vane fashoni lollipop keke!
Ndezvipi zvinongedzo zviri mune lollipop recipe?
8 oz shuga
5 oz chibage manyuchi
2 oz yakadonhedzwa kana mvura yemumabhodhoro
1/2 tsp kunhuhwirira kweswidi
Chinhu chikuru nezve iyi yakapusa yakagadzirirwa lollipop recipe ndeyekuti izvo zvinoshandiswa zviri nyore kuuya nazvo. Chero ani zvake anogona kuzviita. Iwe unogona kunge uine izvi zvinoshandiswa mumba mako kare kana iwe ukaita chero huwandu hwekubheka. Zvese zvaunoda ishuga (isina hupfu), chibage sirasi, yakadiridzwa (kana yakabhoderedzwa) mvura, candy kunhuhwirira uye kuchenesa chikafu kana zvichidikanwa. Ndakawedzera mamwe mafafita kumalollipops angu ekushongedza.
Candy kunhuhwirira kungave kuri kwechienzi mukati mayo asi zviri nyore kuwana. Iwe unogona kuwana kunhuhwirira kweswiti kuzvitoro zvakaita seMichaels kana Jo-Anns zvigadzirwa zvezvitoro kana mune yako yemuno keke yekushongedza zvitoro. Candy flavoring yakanyatsogadzirwa kuti imiridze tembiricha yakakwira yeshuga isina kupisa isingarasikirwe nayo hwema. Iwe haugone kushandisa muto kana zvinotsiviwa panzvimbo pekutapira kweswiti uye uwane mhedzisiro yakafanana, zvinosuruvarisa.
Ndezvipi zvishandiso uye maturusi aunoda kugadzira lollipop recipe?
Kuti ubike shuga uri kuzoda mimwe michina kuti hupenyu hwako huve nyore. Ini handishandise chero lollipop molds yeiyi lollipop recipe asi iwe unogona kunyatso shandisa molds kana iwe uchida chaiyo chimiro kana saizi. Ingo ita shuwa kuti urikushandisa kuumbwa kwakagadzirwa neswiti yakaoma, zvikasadaro, dzinogona kusungunuka kubva pashuga inopisa.
Stainless simbi hari ine rinorema pasi kuti zvakaenzana kugovera kupisa
Silicone magiravhusi ekudzivirira maoko ako
Iwe unogadzira sei lollipops yekugadzira?
Kugadzira iyo lollipop recipe iri chaizvo yakanaka nyore kana zvasvika kwazviri. Sanganisa shuga yako, sirasi yezviyo nemvura mupoto yako uuye nazvo kumota. Deredza kupisa kwepakati kuti unyatso simmer. Hapana chikonzero chekumutsa. Vhara musanganiswa wako nechivharo kwemaminitsi mashanu. Izvi zvinokonzera kugadzikana kuita pachivharo icho chinodonhedza pasi mativi epani uye kushambidza uye kurasika makristasi eshuga ayo anogona kukonzera crystallization kana isina kunyungudika.
Neimwe nzira, iwe unogona zvakare kushandisa yakachena pastry bhurashi uye mvura nyowani kukwesha kutenderedza mativi epupu kuti usuke pasi shuga makristasi. Ingova nechokwadi chekuti ibhuruki idzva repasita uye haina mafuta kana marara ezvekudya mumabrashi anogona kukanganisa switi yako.
Kamwe musanganiswa paunenge uchitubuka, isa yako thermometer ye candy uye bvisa chivharo. Ichi chikamu chatinofanira kumirira kuti mvura ishanduke kubuda mumusanganiswa. Izvo zvinogona kutora maminetsi mashoma. Iwe unozoona kuti tembiricha yako ichagara yakatenderedza 225ºF kwechinguva kudzamara mhepo yese yanyangarika. Usamutsa musanganiswa zvachose.
maitiro ekugadzira keke yekustrawberry keke
Tarisa yako thermometer yehwipi zvakanyatsonaka, nekukurumidza panopera hutsi hwese uye mvura yako yaenda, tembiricha inomuka nekukasira uye haudi kuipisa. Rega musanganiswa wako ubude kusvikira wasvika 300ºF iyo inonzi iyo yakaoma yakaoma nhanho .
Kana ukangosvika padanho rakaomarara, bvisa musanganiswa kubva pamoto. Ita mukati mako mavhenekeri uye mavara ikozvino kana uchida. Iye zvino unogona kudira zvihwitsi zvako muforoma dzako kana kuisa pasilicone mat yako kuti uite maollipop ako.
Nzira yekugadzira lollipops isina fomu
Kuti uite ma lollipops ako ekugadzirira, mirira kuti musanganiswa wako utonhorere zvishoma kuti uwane mukobvu. Ukadira 300ºF shuga pamubhedha wako zvinomhanya munzvimbo yese.
Iwe unogona zvakare kudururira zvihwitsi zvako mune zvidiki silicone yekuyera mukombe kuve neakawanda kutonga pamusoro pechimiro cheyako lollipop. Kana iwe uchida lollipop template iwe unogona kupurinda yangu lollipop template kuisa pasi pe silicone. Ita shuwa kuti iwe unopfeka mamwe anodzivirira silicone magurovhosi kudzivirira shuga kutsva.
Ita bvunzo diki kudira kana iwe uchida kuve nechokwadi kuti shuga iri kuichengeta iri chimiro. Ita shuwa kuti yako yepamusoro yakati rebei kana kuti uchave nenguva yakaoma kuwana marollipop anotenderera asina fomu.
Isa yako silicone bonde pamusoro petemplate uye udururire shuga yako kusvikira yave diki zvishoma pane denderedzwa. Isa imwe yetsvimbo yako yemalollipop muzasi 1/3 yeshuga inopisa wochishandura kuitira kuti tsvimbo ivharwe (ona vhidhiyo).
Kana iwe uri kuwedzera kusasa, iwe unogona kuisa mashoma pamusoro izvozvi. Pamashizha egoridhe, ndakaisa shizha pane lollipop ndichangodira.
unoita sei uchifarira icing
Kugadzira marollipops angu akaomeswa, ini ndakapenda pipi yangu nedonhwe rerudzi rwechichena cheruvara uye imwe chidimbu nedonhwe rekudya kwekusviba. Tenderera pamwe chete uye udururire. Kana iwe uchida yako malollipops akajeka, ingo wedzera chikafu chekudya. Kana iwe uchida kuti vasaonekwe, wedzera donhwe remuchena chikafu chevara pamwe chete neruvara rwako.
Rega ma lollipops ako atonhorere kwemaminitsi gumi nemashanu usati wasimudza iwo kubva pasilicone mat.
Kana mapopu ako atonhorera unogona kusheedzera musana wekumashure kuti uve nekristaro yakajeka (sarudzo).
Inguva yakareba sei inogadzira lollipops ekupedzisira?
Lollipops haana chaizvo zuva rekupera kubvira zvaakagadzirwa neshuga neshuga zvinongozvichengetedza pachako. Usandiudze kuti hausati wambodya chihwitsi cheHalloween chegore. Ndinoziva kuti ndinazvo.
Ndakamboita bvunzo diki ndokusiya malollipop angu mukamuri yekupisa kwemavhiki mashoma kuti ndingoona zvichaitika. NdiFebruary saka takawana mhando dzese dzemamiriro ekunze. Sinou, zuva, mvura, chimvuramabwe. Chinhu chega chakaitika ndechekuti vakanamira zvishoma. Ivo vangadai vasina kuwana inonamira dai ndakavachengeta ndakavhara asi ndaida kuziva kuti mhepo yaizovakanganisa here. Kana iwe uri munzvimbo ine hunyoro hwakanyanya iwe unofanirwa kuzvichengeta zvakavharwa kana mumwe nemumwe akaputirwa ne cellophane kuti macolipops asashanduke kuita tsvina inonamira.
Chii chaungaite nezvasara?
Iwe unogona kudira yakasara lollipop shuga padenga resilicone uye rega itonhore zvakakwana. Pwanya muzvidimbu chitoro muhomwe yepurasitiki. Ipapo unogona kuinyungududza pese paunenge uchida kawidi yakaoma. Hapana chikonzero chekudzosa kumusoro kusvika ku300 toF, ingo nyungudika mu microwave mune yekupisa proof mudziyo.
Unogona here kugadzira iyi lollipop recipe isina chibage sirasi?
Iyi recipe lollipop ine sirasi yegorosi nokuti sirasi yegorosi inodzivirira crystallization. Mune dzimwe nzvimbo dzenyika, zvinogona kunetsa kuwana chibage sirasi. Pasina kunetseka, iwe uchiri kukwanisa kugadzira malopipopu epamba usingashandisi sirasi yechibage.
Ingosiya chibage sosi kubva kune ino kamukira asi chenjera kwazvo kushambidza mativi epani yako kudzivirira makristasi eshuga kubva mukukura. Kana shuga yako ichijekesa, hapana imwe nzira yekuichengeta.
Iwe unogadzira sei lollipop keke?
Iwe unogona kunge wakaona mamwe echinyakare lollipop keke pa Instagram nguva pfupi yapfuura uye wakashamisika kuti vanozvigadzira sei! Ndakafunga kuita imwe yangu neyangu lollipop recipe uye ndinoda kuti zvakazoita sei! Ndakaita mhando nhatu dzakasiyana dzemalollipops. Yakajeka ine shizha regoridhe, rakajeka negoridhe madhiri uye machena machena. Ndakagadzira matatu erudzi rwese ndikaronga pamusoro pekeke rangu.
Ndakashongedza yangu marbled fondant keke riine rimwe shizha regoridhe kuti rienzane nemalollipop uye tide maitirwo azvo. Chinokosha kuronga marollipops uye kukwirira kwakasiyana nekusanganisa nekuzvifananidza kuti zvionekwe zvakaenzana.
Unoda kudzidza maitiro ekugadzira yako wega lollipop keke? Tarisa vhidhiyo iyi nezve masikirwo andakagadzira imwe yakaisvonaka goridhe uye machena marollipops uye ndikashandisa iwo kushongedza yangu yemarble keke kugadzira inoyevedza lollipop keke dhizaini!
Yeshuga-isina lollipop sarudzo, shandisa Simi-Makeke akagadzirira kusungunuka isomalt .
Homemade lollipops zvinonakidza uye zviri nyore kuita. Izvo zvinonaka uye mavara zvinogona kuve nyore kugadziriswa. Iyo yakakwana yekugadzirisa imba! Gadzirira Nguva:5 mins Nguva Yakabika:30 mins kutonhora:gumi neshanu mins Nguva Yese:35 mins Makorori:159kcal
▢8 oz shuga yakawanda
▢5 oz chibage manyuchi
▢piri oz mvura yakasviba (kana mabhodhoro)
▢1/2 tsp candy kunhuhwirira
▢ chikafu chekudya (kusarudza)
Sanganisa shuga, sirasi yechibage nemvura mune inorema-yakadzika, isina simbi poto pamusoro pe med-yakanyanya kupisa. Uyai kune chemota
Vhara musanganiswa nechivharo uye rega kunaya kwemvura kuvake kwemaminitsi mashanu (izvi zvinobatsira kushambidza shuga kubva pamativi epani). Bvisa chivharo uye udzikise kupisa kusvika pakati.
Isa svutugadzike yetwitsi uye rega musanganiswa ubike (usamhanyisa) kusvika wasvika 300ºF.
Bvisa musanganiswa kubva pakupisa uye fambisa mukunaka uye mavara
Rega musanganiswa utonhorere zvishoma kusvikira wakora zvakakwana kuti ubate chimiro paunodururwa uye wozodururira mumatenderedzwa pane yako silicone mat (kana mune ako maswiti molds). Pinza tumiti twemarollipop uye rega utonhorere zvachose usati wabvisa pamubhedha.
Torch mativi ekumashure emalollipops (sarudzo) kuti aite kuti anyatsojeka. Chengetera mumidziyo yakasungwa nemhepo mukati tembiricha yemukati kana kuputira yega kuti zvidzivirire kubva pakunamira.
vanilla keke yemuchato recipe kubva pakutanga
ngirozi chikafu chekeke mapheka nema strawberries
iyo yakanakisa chena keke recipe munyika